WidhWidh Online » News » Ciidamada SNM oo isku habar wacday Dagaal Rogaal Celin ah Magaalada Xudun iyo Co. Caare Iyo Doolaal Gacamah Iskula Tagay
6:10 pm » Madaxda Napoli Oo London Kula Kula Yeelatay Rafael Benitez Iyagoo Baadigoobaya Macalin Cusub 5:44 pm » Wafdigii Dowlada Faderalka ahaa ee ku sugnaa Kismaayo oo Lagu Amray Inay isaga Baxaan Magaaladaas 5:33 pm » Warar Dheeraad ah oo Ka Soo Baxaya Dagaal Gacmaha La Iskula Tagay ee Jabhada SNM Xafladoodii(Daawo Video) 5:33 pm » Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Ansixiyaay Qodobo ay soo jeediyeen Gudiga maaliyada Baarlamaanka 5:20 pm » Dalka Soomaaliya iyo Kan Suudaan oo Ka Wadahadlay Xoojinta Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliya 5:04 pm » Daawo Hees Cusub: LAYMA DHAAFI KARO – Loo Qaaday Shacabka USP (Khaatumo, Maakhir, & Awdal) 4:59 pm » Haweenka Qaadka iibiya oo loo soo ban-dhigay qorshayaal cusub(Halkan Ka Dhagayso) 4:45 pm » WAR DEG DEG AH:-Xasan Sheekh maxamud Oo Jagooyin Cusub Soo Hor Dhigay Barlamaanka 4:18 pm » War Deg Deg Ah ” Ciidanka SNM Ee Magaalada Ceerigaabo Oo Xidhay Wariye Rer Khaatumo Ah Oo Joogay Magaalada Ceerigaabo Maxaase Lagu Xidhay? 3:49 pm » Daawo Muqaalka::Weli adiga oo arkaya ma qabsatay ilmahaaga Xaaladdan Nuucaan ah…? Ciidamada SNM oo isku habar wacday Dagaal Rogaal Celin ah Magaalada Xudun iyo Co. Caare Iyo Doolaal Gacamah Iskula Tagay Published on Dec 03 2012 // WARAR, Wararka Somalia Share
Wararka ka soo baxaya Taliska Magaalada Hargaysa ee maamulka Jabhada SNM ayaa sheegay in halkaasi uu ka socodo abaabulkii ugu danbeeyay ee lagu qaadayo magaalada Xudan ee Gobolka Sool.
Dagaal ayaa ah mid la qorshaynayo in lagula wareego gabi ahaaba Magaalooyinka Xudan iyo Taleex oo la doonayo in lagu soo afjaro Maamulka Khaatumo State hada u ah xarunta magaalada Taleex. Waxaa kale oo dhinac socda in Isgaadhsiinta oo dhan laga jaro gabi ahaaba deegaanadaas oo ku xidhan Gobolada Bari ee magaalada Bosaaso waxaana iska gaashayna maamulka Puntland iyo Kan Soomalilandba.
Dhinaca kale dagaaladii labada casho ka dhacay duleedka magaalada Xudan ayaa ahaa mid cashar loogu dhigay maamulka Hargaysa oo isku qaaday deegaan aysan taariikh ahaan aysaba aqoon u lahayn cida ku nool. Waxaana saacado gudohood kaga dhintay Saarkiishii ku qooqi jirtay magaalada Lascanood siiba ninkii la odhan jiray Canjeex had iyo jeer caayi jiray dadka reer Lascanood.
Mid ka mid ah websiteda ku hadal afka reer Hargaysa ayaa waraysi ay la yeesheen Canjeex walaakiis ayaa aad ugu xumaaday nin walaakiis gabihiisa lagu aaso ”War qofku dagaalka uu ku dhintaa laakiin in kabihiisa lagu aaso waa arin naxdin leh. miyaa la qarinyaa waxaa meesha iiga soo baxday ayuu yidhi rag badan lagu qariyay dagaalkii Kalshaale iyo kan Xudan ka dhacay ee walaakay kabihiis lagu aasay.
Dagaalka ka dhacay Duleedka magaalada Xudan ayaa ahaa mid qasaaro xoogan soo gaadhiiyay maamulka Hargaysa waxaana halkaas kaga dhitnay ciidamo badan iyo waxayna ku waayeen gawaadhi badan oo gaashaam. inkasta oo laga qarinayay shacabka Burco iyo Hargaysa ayaa waxaa lagu maaweeliyay war Xudan waanu soo afjarnay ee hadana waxaanu ku sii jeednaa Magaalada Taleex.
Co. Caare oo qaabilkasta dhinaca Sirdoonka Mamaulka Hargaysa ayaa ka been sheegay deegaanka Xudan iska oo ka dhaadhiciyay in dadka reer Nugaaleed aysanba dagaalamin oo iska cararaan, sidii lascanod ay ugu carareen oo kale, waxaase arinkaas markiii danbe dagaal gacan hadalka dhexmaray Doolaal oo ka soo jeeda Beesha arab sheegayna inuu Co. caare ka been sheegay Magaalada Xudan.
Isku soo wada duubow waxaa muuqta in hada ay wadaan dagaal rogaal celin oo lagu qaadayo magaalada Xudan ee Gobolka Sool, waxaa laga yaabaa in dagaalkaasi uu noqto mid ka xun kii kalshaale ka dhacay oo kale.
0 Members.613 Guests.